VAIA3000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကို တစ်နာရီတွင် ၃၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉ တရားဝင်လက်မှတ်ရရှိထားပါတယ်။
မော်ဒယ်- VAIA 3000
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VAIA3000
Are you looking to buyaquality industrial water purification product? 3000LPH VAIA3000 Purified Water Filtration System using stainless steel autovalve filter column will beasuggestion for you to choose to use.
အဆင့်အတန်းမီတဲ့ စက်ရုံသုံး ရေသန့်ပစ္စည်းကို ရှာဖွေနေပါသလား? စတိန်းလက်စ်စတီး အော်တိုအဆို့ကို အသုံးပြုထားတဲ့ 3000LPH VAIA3000 ရေသန့်စက်က သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးသော ရွေးချယ်မှု ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
This isasystem designed specifically to filter and treat water withalarge capacity of 3000 liters of water per hour, the product is suitable for purifying pure water for families, densely populated areas, and production facilities. bottled and bottled drinking water, for hospitals to have water sources for dialysis, schools, factories ...
ဒီစက်ကို တစ်နာရီမှာ ၃၀၀၀ လီတာ စစ်ထုတ်ပြီး ရေကိုပြုပြင်နိုင်အောင် စပါယ်ရှယ် ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။ ဒီစက်က မိသားစု၊ လူများတဲ့ နေရာ၊ ရေသန့်ဘူးတွေ ထုတ်လုပ်မှု၊ ဆေးရုံတွေ၊ ကျောင်းတွေ၊ စက်ရုံတွေ စတဲ့ နေရာတွေမှာ အသုံးပြုဖို့ သင့်တော်ပါတယ်။
Viet An General Trading Joint Stock Company is proud to be the unit that directly imports and distributes 3000LPH VAIA3000 Purified Water Filtration System in Vietnam and exports to ASEAN countries. When using 3000LPH VAIA3000 Purified Water Filtration System, you will no longer have to worry about the quality of the water you use, you will no longer have to worry about the risk of diseases related to the use of water. hygiene standards are not met. Let's join Viet An to find out the practical benefits that you will get when choosing to install 3000LPH VAIA3000 Purified Water Filtration System through the article below.
Viet An အထွေထွေ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီက 3000LPH VAIA3000 ရေသန့်စက်ကို ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာ တိုက်ရိုက် တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးပြီး အာဆီယံနိုင်ငံတွေကို တင်ပို့တဲ့ ယူနစ်ဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ 3000LPH VAIA3000 ရေသန့်စက်ကို အသုံးပြုတဲ့အခါ သင်အသုံးပြုနေသော ရေရဲ့ ကွာလတီ၊ ရေရဲ့ အသုံးပြုမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရရှိမည့် ရောဂါပိုးမွှားတွေ၊ ရေသန့်စံချိန် စံညွှန်းတွေကို စိတ်ပူစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ 3000LPH VAIA3000 ရေသန့်စက်ကို အသုံးပြုတဲ့အခါ ရရှိလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေကို အောက်က ဆောင်းပါးမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
10 reasons to install 3000LPH VAIA3000 Purified Water Filtration System of Viet An
Viet An ရဲ့ 3000LPH VAIA3000 ရေသန့်စက်ကို တပ်ဆင်ရန် အကြောင်းပြချက် ၁၀ ချက်
1. Using the purification system, purified water treatment of 3000 liters / h, you will haveasafe water source, protect your health, prevent diseases
တစ်နာရီမှာ ၃၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ရေသန့်စနစ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင့်မှာ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ ရေအရင်းအမြစ်ကို ရရှိနိုင်ပြီး ရောဂါပိုးမွှားတွေ ဝင်ရောက်မှုကို တားဆီးနိုင်ကာ ကျန်းမာရေးကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
2. You will be proactive and autonomous about the quality of the pure water you use. Stay away from diseases related to using unsanitary or unsanitary water.
သင်အသုံးပြုနေတဲ့ ရေသန့်ရဲ့ ကွာလတီကို သင်ကိုယ်တိုင် လုပ်ယူလို့ ရပါတယ်။ ညစ်ညမ်းတဲ့ရေကြောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါပိုးမွှားတွေရဲ့ အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
3. There are more than 2,100 pollutants in the water right now and don't think that your water using tap water is safe. In it there are many harmful substances that will adversely affect your body. However all these problems will be completely eliminated when you use 3000LPH VAIA3000 Purified Water Filtration System. With RO water filter with micro filter eye size will remove 99.9% impurities, toxins, micro rust, bacteria, harmful chemicals mixed in all types of water and give youasource of pure water. hygienic standard QCVN 6-1:2010/BYT
ယခုအခါမှာ ရေထဲမှာ ညစ်ညမ်းစေတဲ့ အရာ ၂၁၀၀ ကျော်ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘုံပိုင်ရေကို အသုံးပြုရတာ လုံခြုံတယ်လို့ မတွေးပါနဲ့။ ဒီရေထဲမှာ ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိခိုက်စေတဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေ အများကြီး ပါဝင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဒီအန္တရာယ်တွေ အားလုံးကို 3000LPH VAIA3000 ရေသန့်စက်ကို အသုံးပြုတဲ့အခါ ဖြေရှင်းနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ မိုက်ခရို ရေစစ်အရွယ်အစားနဲ့ RO ရေစစ်က ၉၉.၉%သော အညစ်အကြေးတွေ၊ အဆိပ်အတောက်တွေ၊ မိုက်ခရို သံချေးတွေ၊ ဘက်တီးရီးယားတွေ၊ ရေထဲက အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေကို ဖယ်ရှားနိုင်ပြီး QCVN 6-1:2010/BYT စည်းမျဉ်းနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ သန့်ရှင်းပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ရေသန့်ကို ရရှိနိုင်မှာပါ။
4. You do not have to spend money to buy water bottles, purified water bottles outside, you will savealot of money every month and still have pure water to ensure your food and drink needs. Daily
ရေဘူးတွေ၊ ရေသန့်ဘူးတွေကို ဝယ်ယူဖို့ သင်ပိုက်ဆံတွေ အများကြီးသုံးစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ လစဉ် ပိုက်ဆံတွေ အမြောက်အမြားကို ချွေတာနိုင်ပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ရေသန့်ကို နေ့စဉ် ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။
5. You can also increase income and create jobs for many people when using the VAIA3000 purified water filtration system to openabusiness of bottled and bottled pure water to supply the market. school.
VAIA3000 ရေသန့်စက်ကို အသုံးပြုပြီး ရေသန့်လုပ်ငန်းကို ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် ဝင်ငွေလည်း တိုးပွါးနိုင်သလို လူအများအတွက်လည်း အလုပ်တွေ ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ထို့အတူ ဈေးတွေ၊ ကျောင်းတွေအတွက် ရေသန့်ကို ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
6. The product is capable of fast purification of pure water, large capacity up to 3000 liters of water per hour. Meanwhile, the quality of the finished water always ensures purity with health benefits
ဒီစက်က ရေကို တစ်နာရီမှာ ၃၀၀၀ လီတာနှုန်းနဲ့ လျင်မြန်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် စစ်ပြီးတဲ့ရေကလည်း ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးအမြတ်များစွာ ရှိပါတယ်။
7. Automatic, closed water purification process without human participation. You just need to connect the filtration system to the power source, the water source, then the system will automatically operate the purification process.
လူတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုမပါဘဲ အော်တိုလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ သင်က ရေစစ်ကို ပါဝါအရင်းအမြစ်၊ ရေအရင်းအမြစ်နဲ့ ဆက်သွယ်ပေးရုံပါပဲ။ အဲ့ဒီ့နောက် စနစ်က ရေသန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို အော်တိုလည်ပတ်ပါတယ်။
8. This is the system produced by the most modern technology of the United States, with the main components imported from genuine, high quality, so the time of using the filter system is up to 15 years.
ဒီစက်ကို US ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံးနည်းပလာနဲ့ လုပ်ဆောင်ထားပြီး စစ်မှန်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက် ၁၅ နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
9. The price of the filtration system is very reasonable, just spending about 269 million you can ownasuper smart water purifier today
ရေစစ်ရဲ့ ဈေးနှုန်းက သင့်တော်ပါတယ်။ ၂၆၉သန်းလောက် သုံးလိုက်တာနဲ့ စူပါရေသန့်စက်ကို ယနေ့ပဲ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီ။
10. The product is free for installation nationwide, hasa12-month warranty and is Viet An General Trading Joint Stock Company - Vietnam's No.1 brand in providing water filtration and treatment solutions for distribution and installation.
ဒီစက်ကို နိုင်ငံအနှံ့ အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးပြီး ၁၂ လ အာမခံချက်ရှိပါတယ်။ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံရဲ့ နံပါတ် ၁ တံဆိပ်ဖြစ်တဲ့ Viet An မှ ရေသန့်စက်တွေကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနေပါတယ်။
Specifications of 3000LPH VAIA3000 Purified Water Filtration System
3000LPH VAIA3000 ရေသန့်စက်ရဲ့ ဖော်ပြချက်များ
Product's name: 3000LPH VAIA3000 Purified Water Filtration System
Capacity: 3000 liters / h
Size: 7x0.8x2.2 m
Power consumption: 4.5 Kw / h
ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်- 3000LPH VAIA3000 ရေသန့်စက်
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း- တစ်နာရီတွင် ၃၀၀၀ လီတာ
အရွယ်အစား- ၇×၀.၈×၂.၂ မီတာ
ပါဝါစားခြင်း- တစ်နာရီတွင် ၄.၅ ကီလိုဝပ်
ပါဝါပေးပို့မှု- ၂၂၀ ဗို့၊ ၃၈၀ ဗို့
The main structure of 3000LPH VAIA3000 Purified Water Filtration System
3000LPH VAIA3000 ရေသန့်စက်၏ အဓိက ဖွဲ့စည်းပုံ
+ Pumping system: Create pressure to push water throughaheavy metal filter system,adetox filter andasoftening system.
ရေစုပ်စက်- ကြီးမားသော သတ္တု ရေစစ်၊ အဆိပ်အတောက်ရေစစ်၊ ရေကို ပျော့စေတဲ့ စနစ်တွေကို ဖြတ်ဖို့ ရေကို တွန်းပို့ရန် ဖိအားဖန်တီးပေးပါတယ်။
Air disinfection system: Air disinfection createsasterile environment in the air
လေပိုးသတ်စနစ်- ပိုးသတ်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။
+ Heavy metal filtration system: Including Mn sand, quartz sand, automatic valve and stainless steel column to filter Manganese metal, filter precipitated heavy metals.
ကြီးမားသော သတ္တုရေစစ်- မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ကြီးမားသော သတ္တုများကို စစ်ထုတ်ရန် Mn သဲ၊ သလင်းကျောက်သဲ၊ အောတိုအဆို့၊ စတိန်းလက်စ်စတီးကော်လံတို့ ပါဝင်ပါတယ်။
+ Detox filter system, color, odor: Including stainless steel column, activated carbon and automatic valve to detoxify, color, odor and toxic gas in water
အဆိပ်အတောက်၊ အရောင်၊ အနံ့ ရေစစ်- ရေထဲမှ အဆိပ်အတောက်၊ အရောင်၊ အနံ့အသက်၊ ဂက်စ်တွေကို စစ်ရန် စတိန်းလက်စ်စတီးကော်လံ၊ ကာဗွန်၊ အော်တိုအဆို့တို့ ပါဝင်ပါတယ်။
+ Limestone and water softening system: Including stainless steel column, salt-absorbing valve and cationic particles to remove limestone and magnesium in water
ထုံးကျောက်စစ်ထုတ်ပြီး ရေကို ပျော့စေသောစနစ်- ရေထဲမှ ထုံးကျောက်နှင့် မဂ္ဂနီဆီယမ်ကို ဖယ်ရှားရန် စတိန်းလက်စ်စတီးကော်လံ၊ ဆားကိုစုပ်ယူသော အဆို့၊ ကပ်ရှင်အမှုန့်များ ပါဝင်ပါတယ်။
+ Safe filter system: To protect the RO membrane
လုံခြုံသော ရေစစ်စနစ်- RO အလွှာပါးကို ကာကွယ်ရန်
+ Ro membrane system: Purified water filtration meets standards QCVN 6-1:2010/BYT
RO အလွှာပါးစနစ်- QCVN 6-1:2010/BYT စည်းမျဉ်းနဲ့ ကိုက်ညီသော ရေသန့်ကို ထုတ်လုပ်ပေးတယ်
+ Bactericidal and germicidal system with UV lamp and ozone machine
UV အလင်းရောင်နှင့် အိုဇုန်းစက်ပါဝင်သော ဘက်တီးရီးယားနှင့် ပိုးမွှားရေစစ်
What additional investment doesa3000LPH VAIA3000 Purified Water Filtration System have to invest?
3000LPH VAIA3000 ရေသန့်စက်တွင် ထပ်ပြီးရင်းနှီးမြုပ်နှံနိုင်သော အခြားပစ္စည်းများ
In order to complete the business and production process, Viet An advises that after choosing to install Viet An's 3000LPH VAIA3000 Purified Water Filtration System, you should invest in buyingabottle filling machine system. general auxiliary equipment withacapacity of 200 bottles / hour (20 liters / bottle) withaprice of over VND 200 million. This isaproduct made of stainless steel, ensuring 100% food safety and hygiene. In addition, you should also invest in an automatic bottle shrinking machine used to shrink bottle nozzles, bottle necks, bottle caps and bottle coal, with many different temperature modes to adjust to your needs. user. Extraction machines are manufactured at factories of Viet An or imported from the most advanced countries such as Italy, Germany, England, Japan ... according to your order.
ပြည့်စုံသော ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ဖို့ 3000LPH VAIA3000 ရေသန့်စက်ကို တပ်ဆင်ပြီးတဲ့အခါ ဗီယက်နမ်ငွေ သန်း ၂၀၀ ကျော်တန်ဖိုးရှိ တစ်နာရီမှာ ၂၀ လီတာဘူး ၂၀၀ ကျော် ဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့ ဘူးတွေကို လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စနစ်ကို တပ်ဆင်ဖို့ Viet An မှ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ဒီစက်ကို စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး လုံခြုံစိတ်ချရမှု ရှိပါတယ်။ ထို့အပြင် ဘူးနှုတ်ခမ်း၊ လည်ပင်း၊ အဖုံးတွေကို လိုအပ်တဲ့ အပူချိန်အတိုင်း ရှုံ့ပေးနိုင်တဲ့ ဘူးတွေကို ရှုံ့ပေးတဲ့စက်ကို ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။ ဒီစက်တွေကို Viet An မှလည်း ထုတ်လုပ်သလို သင်မှာယူတဲ့အတိုင်း အီတလီ၊ ဂျာမနီ၊ အင်္ဂလန်၊ ဂျပန် စတဲ့ ခေတ်မီနိုင်ငံများမှလည်း တင်သွင်းပါတယ်။
All of these products are supplied by Viet An. For more information about water purification and filling products, please contact Viet An at 0949 414141
ဒီစက်တေါ အားလုံးကို Viet An မှ ပေးပို့ပါတယ်။ ရေသန့်စက်တွေအကြောင်း ပိုမိုသိရှိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ၀၉-၄၉ ၄၁ ၄၁ ၄၁ ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
2 Air disinfection lamp လေပိုးသတ်မီးအိမ်4unit VA/ USApec
3 Air disinfection lamp hanger လေပိုးသတ်မီးအိမ်ရုံ4unit VA/ USApec
14 20” PP Filter Cartridge ၂၀7unit VA/ USApec
15 20” Filter housing ၂၀ 1 unit VA/ USApec
27 20” stainless steel filter housing စတိန်းလက်စ်စတီးစစ်ထုတ်ကိရိယာအိမ် 1 unit VA/ USApec
28 Bacterial filter Cartridge ဘက်တီးရီးယားစစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့်3unit VA/ USApec
Hỏi đáp & đánh giá 3000LPH VAIA3000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်